Sidee loo Nadiifiyaa Meelaha Kumbuyuutarkaada
Nadiifinta Diyaarsanaanta Qalabka Nadiifinta Qalabka Dufanka ah iyo Tayada Low Print
Tifaftirka sawirku wuu hayaa marka ay daabacaan jilbaha. Waxaa laga yaabaa inaad aragto dhuubka jilicsan ama khadadka ku yaal xaashida. Si kastaba ha noqotee, nadiifinta farshaxanka waa naadi sahlan oo fudud.
Hoos waxaa ku xusan tababarka tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan isticmaalka wareegga nadiifinta ee nadiifiyaha ee aan qaadaneynin 5 ama 10 daqiiqo si loo dhamaystiro.
Talaabooyinka Nadiifinta Dufcadaha
Fiiro gaar ah: Tilmaamaha halkan ku yaala waxay ku jiraan Windows for Canon MX920 gaar ahaan, laakiin inta badan daabacayaashu waxay u shaqeeyaan si isku mid ah.
Guddi Xakameysan furan iyada oo loo marayo User User Menu ama Start menu, iyada oo kuxiran qaybtaada Windows.
Dooro Rikoorada iyo Muuqaalka ama daabacayaasha iyo qalabka kale ee kale . Xulashada aad aragto waxay ku xiran tahay sida cusub cusub ee Windows.
Guji ama ku dheji Qalabka iyo daabacayaasha ama View View Printers ama Fax Printers .
Soo hel kumbuyuutarkaaga oo ku habboon guji si aad u doorato doorashooyinka daabacaadda . Haddii qalabkaagu yahay makiinad fax ah oo kale, waxaa laga yaabaa inaad aragto laba ikhtiyaar - dooro mid ka hadlaya qoraaga.
Furo xannibaadda ama nadiifinta nadiifinta. Wixii Canon MX920, Daaqadda Doorashada Dhiirrigelintu waxay leedahay dhowr tabs oo ka sareysa sare - dooro Dayactir . Mar labaad, daabacayaasha intooda badani waa inay lahaadaan doorashooyin isku mid ah oo la mid ah.
Wixii Canon MX920, badhanka ugu horeeya waa in lagu nadiifiyo muusikada. Ka dib markaad dooranaysid si aad u nadiifiso, waxaad u badan tahay in aad dooratid qaybaha kala duwan ee loo yaqaan 'unclogeads'. Baaskiilka ugu fiican waa inuu doorto ikhtiyaarka nadiifiya dhammaantood, sida Colors All .
Hubi in qoraaga loo rogay iyo in ay jiraan waraaqo qaar ka mid ah, ka dibna riix On Execute ama Start , wax kasta oo ikhtiyaarka ah ayaa kuu ogolaanaya inaad bilowdo nadiifinta barbaarinta. Waxaa laga yaabaa inaad aragto shaashad kale oo aad ku xaqiijisay in aad dhab ahaantii rabto inaad daabacdo qaabka.
Kumbuyuutarku wuxuu ku daabacan doonaa qaab la socdo shabakada sare iyo dhowr xabbadood oo midabo kala duwan ah. Laba sawir ayaa muujinaya kormeerkaaga si aad u barbardhigtid sawirka daabacan.
Mid ka mid ah, shabakada iyo midabyada waa kuwo fiiqan oo cad; dhinaca kale, qaar ka mid ah sanduuqyada sanduuqa ah waa la maqan yahay, midabkuna waa la jarjaray.
Haddii daabacaadu ay la socdaan sawir cad, muuqaal cad, si siman uga bax. Haddii ay daabacdo sanduuqyada sanduuqyada ama xariijinta, ka dibna riix Nadiifinta ama wixii ikhtiyaar kale ah ee kuu ogolaanaya inaad bilowdo geeddi-socodka nadiifinta ee daabacaadda ee daabacaada.
Marka taasi dhacdo, waxaad ku celin doontaa nidaamka oo dhan si aad u hubiso in nadaafada ay si guul ah u guulaysatay. Waxay qaadan kartaa laba nadiifin haddii daabacadahaaga runtii xoqan yihiin.
Haddii, ka dib labo nadiif, waxaad weli heleysaa natiijo liidata, waxaa jira ikhtiyaar fara badan oo ku saabsan daabacadaha qaar ee shaqada qabanaya.
Tallaabooyinkani ma dalbadaan kumbuyuutarkaaga?
Tallaabooyinka kor ku xusan waxaa loogu talagalay qoraaga Canon MX920 oo dhan. Haddii aad isticmaashid kumbuyuutar oo leh khiyaamo aad u kala duwan oo aanad ka heli karin xulashada nadiifinta daabacaadda, waa inaad raadisaa buugta isticmaalaha ee bogga soo saaraha.
Raac tilmaamahan haddii aad haysato Canon, Brother, Dell, Epson, Ricoh, ama HP printer.
Fiiro gaar ah: Buug-gacmeedka isticmaalka makiinada ayaa ku jira qaabka PDF , markaa waxaad u baahan tahay akhristaha PDF si aad u furto.
Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Helitaanka Booga Internetka
Windows 10 Cusbooneysiinta: Tilmaamaha Badbaadada
Todoba Dhimasho Daran: Talooyin Evernote Waa inaad ka fogaato
Muuqaal aad u Faa'iido badan ayaa ku caawin kara, laakiin si fudud ayaad u tuuri kartaa
11 Siyaabaha Looga dhigo Kumbuyuutarkaaga
Caymisyada: Abuuritaanka iyo ilaalinta Nidaamka Furaha Nambarka adag
Nadiifinta Mawjada Kumbiyuutarka Dirta
Sidee looga hortagi karaa Cusboonaysiinta Cusub ee Cusboonaysiinta Macalinkaaga
7 Meelaha ugu Fiican ee Maqaalada Maqaayada ee loogu talagalay Download Songs
Server Apache Apache
Baro Kala duwanaanta WPA2 iyo WPA ee Nabadgelyada Wireless
Sida Loo Baro Luqadda Luqadda
Sida loo sameeyo Ringtones Free for iPhone
Waa maxay Xbox One: Waxkasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Qalabka Best Bookmarking
Tenchu ​​3: Cadhada Khiyaamada Cagaarsho iyo Codadka loogu talagalay PS2
Maxay tahay Qeexitaanka Waxqabadka Waxqabadka?
Waqtiga ugu Horeeya (TTFF)
Xidhiidhinta Isgaadhsiinta USB: Waa maxay Maaddada MSC?
Ka shaqeyneysid xayeysi ahaan sida Design Graphic
Sidee loo diiwaan geliyaa Diiwaanada TiVo ee PC-gaaga
Sida loo Xaqiijiyo D3d9.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladaadka
Sidee loo qoraa dukumiintiyada loo yaqaan "Taskbar" iyo "Declutter Desktop"
Meta Charset Tag ee HTML5
Baqshadeynta Sharraxda Sawir gacmeedka
Sida loo Aqoonsado Farriinta ee OS X Mail
Sidee loo Siisaa Rapi.dll Looma Helin ama Dhamaan Khaladka
Dib u eegis Mophie Juice Pack Plus iPhone Battery Pack